संचारमन्त्रीको चुनौति –प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको अहित हुने कुनै काम गरेको देखाउ - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा गरेको छ । सयदिनको अवधिमा जनताले महसुस गर्नेगरी के–के काम भए ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम गराई किन सुस्त भएको छ ? सरकारमाथि नकारात्मक टिका टिप्पणी भइरहँदा सरकारकै प्रवक्ता किन मौन ? के मन्त्रीले बोलेका कुरा कर्मचारीले नटेरेका हुन् ? मन्त्रालय मन्त्रीले चलाएका छन कि, कर्मचारीले ? यसै विषयमा सागर न्यौपानेलेसूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीसँग गरेको विशेष कुराकानी :
‘सरकारको हनिमुन पिरियड’को कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
जनसरोकारका विषयमा सरकारले सकारात्मक सुरुआत गरेको छ । सरकारले दैनिक आवश्यक सामग्रीहरु खरिदमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गराएको छ । ‘क्वीक रेस्पोन्स गर्ने मेकानिज्म डेभलप’ गरेको छ । कुनैपनि दुर्घटना वा घटनाको ‘क्वीक रेस्क्यु’ गर्नेगरी । अर्काे कुरा सरकारी कामको अनुगमन हुन थालेको छ । जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल सेवा पाउने वातावरण यही सरकारले बनाएको हो । सबै मन्त्रालयले हाम्रो पर्फमेन्स नविग्रियोस भनेर लागि परेका छौं । धेरै कुरा पाइपलाइनमा राखेका छौ । संविधान कार्यान्वयन र पूननिर्माणको लागि ।
कतिपय ठाउँमा पाइसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा वाँकी होला त्यसको अनुगमन गर्नका लागि टोलीहरु खटिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले आफै हस्तक्षेप गरिराख्नुभएको छ । उहाँले (प्रधानमन्त्री)ले हेलिकप्टरबाट गएर भने पनि भूकम्पपीडितलाई राहत रकम बाँड्न निर्देशन दिनुभएको छ । हामीसँग तल स्थानीय संरचना रमेकानिज्महरु नहुँदा भनेजस्तो समयमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । भएका निकायमा सुस्तता भएको पक्कै हो । तर, अहिले हामीले पूननिर्माणका निम्ति लामो टेण्डर गर्ने ४५ दिनको अवधिलाई छोट्याएर संकटकालीन(फाष्टट्रयाक)बाट गर्ने कुरा भएको छ । राजनीतिक तहमा एकातिर मात्रै कोल्टिएको विदेश नीतिलाई यो सरकारले व्यालेन्स गरेको छ । भरखरै भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो, संसारभरी एउटा सन्देश के गयो भने् नेपालमा शान्ति सुव्यबस्था कायम छ, हामी जुनसुकै मूलुकका राष्ट्रप्रमुखहरुलाई नेपाल भ्रमण गराउन सक्षम छौं भनेर विश्वभर मेसेज गएको छ त्यो काम यही प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारले गरेको हो ।
देशभित्रको जनसमूह नेपाली राष्ट्रवाद (महेन्द्रकालीन समयमा अल्पसंख्यक, उत्पीडित, सीमान्तकृत, मधेसी, थारु, मगरलगायत)को परिभाषामा नअटाएकाहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन राज्यकै मूल प्रवाहमा ल्याउन खेलेको भूमिकालाई हल्ला गरेर प्रचार नगर्नु सुस्त हुन सक्ला । मधेससँग थारु महिला मुस्लिमहरुका विषयबस्तुलाई पाखा लगाएर नेपालमा कल्चरल्ली हावी भएको छ, सास्कृतिक, राजनीतिक सामाजिकरुपमा हावी भएको तिनीहरुकै राष्ट्रवादलाई हल्ला गर्दा कतिदिन सम्म टिक्छ ?
हाम्रो देशमा नकारात्मक कुराको बढी चर्चा हुने र सकारात्मक कुरामा उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । तर पत्रकारितामा क्रियाशील, स्थापित पत्रकारले गरेका टिका टिप्पणी हेरौं । माओवादी विरोधी मिसनमा लागेका अरु पेशामा असफल भएर आएका मानिसले के लेखे त्यतातिर नजाऊ
यो सरकारको परफमेन्सलाई आधार मानेर हेर्दा नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने कारण छैन । किनकी म दावाका साथ भन्छु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गराउन र संविधान संसोधन मार्फद जारी गराउन खेलेको भूमिका इतिहासमा कुनैदिन मूल्याङ्कन हुनेछ । यो कुरामा केही राम्रा स्थापित पत्रकारहरु क्लियर पाएको छु । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएकाहरुले हल्ला गरेका हुन् । सरकारको विरोध गर्नेहरु तिनै हुन् जो सँग आफूले केही गर्न नसकेको कुण्ठा छ त्यसैलाई पोखिरहेका मात्र हुन् ।
अहिले मेरो मन्त्रालयमार्फत गर्न थालेको काम भनेको गोरखापत्रको भवन भूकम्पले ध्वस्त भएको छ, उता सरकारी रेडियो नेपालको ३०० रोपनी जग्गा छ हामी उक्त जग्गा नेपाल प्राधिकरणलाई बेच्दैछौं । रेडियो नेपालले बेच्ने नेपाल प्राधिकरणले किन्ने भएपछि त्यहाँबाट आएको पैसाले सञ्चारग्राम बनाउने र सबै सरकारी मिडिया (एनटिभी, गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल राइजिङ नेपाल)लाई एकै ठाउँमा कार्यालय बनाउने योजना अघि बढाइएको छ ।
नेपालका कर्मचारीतन्त्रमा माओवादीका मन्त्रीहरुलाई अलि फरक ढंगले हेर्दा रहेछन् । उनीहरुले एमाले कांग्रेस स्थायी सरकार ठान्दा रहेछन्, माओवादीलाई शक्ति नै नदेख्ने परिपाटी रहेछ । कर्मचारीतन्त्रले सिष्टम नै नबुझ्ने रहेछन् । अर्काे खतरनाक कुरा भनेको कसैले पनि जिम्मेवारीबोध नगर्ने रहेछन् । जिम्मेवारी नै नलिने एउटाले अर्काेलाई पन्छाउने अर्काेले फेरि अर्काेलाई पठाउने । कांग्रेसले एमालेलाई, एमालेले माओवादीलाई पन्छाउने यो खालको प्रवृत्ति देखियो ।
स्वभाविक रुपमा हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौ । त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हामीले सेयर गर्यौं । हामीले चाहेजस्तो परिणाम दिन सकेका छैनौं । दोस्रो कुरा हामीले जे जति काम गर्यौं, हाम्रो चामल विकिरहेको छैन । अहिलेपनि पिठो नै बिक्दैछ । त्यसैले एउटा कुरा हाम्रो काममा अझै तीव्रता दिने । कामको गति बढाउने । अर्काे कुरा के के काम गर्न सकिन्छ पहिचान गर्नुपर्यो । त्यो काममा एकाग्र भएर लाग्नुपर्यो र हामीले जे काम गरिरहेका छौं, त्यो कामको बारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्यो भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको हो ।
तर, सरकारी मिडियाबाट सरकारी कामको प्रचार हुन नसकेको त हो नी मन्त्रीज्यू,
कयौपटक उद्देश्यविहिन बन्दको सामना जनताले गर्नुपर्छ । यस्तो संक्रमणकालको बेलामा नेपालले संसारका कुनैपनि महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई सुरक्षित भ्रमण गराउन सक्छ भनेर विश्वभर सन्देश दिएको कुरालाई हामीले किन छोपिरहेका छौं ? यो सन्देश ठूलो कुरा हो ।
स्वभाविक रुपमा पार्टीभित्र एउटै स्वर एउटै आवाज नहुँदा ठूलो समस्या आउने त रहेछ । हामीसँग हजारौ पत्रकार छन, तर, हाम्रै पत्रिका छैन ।
मंसिर २ गते, २०७३ - ०८:५० मा प्रकाशित